Mayelana NATHI - Leshan Sanjiang Biological Technology Co., Ltd.
Xhumana Nathi Namuhla!
I-Gallic Acid (Ibanga Lezimboni)
I-Gallic Acid Grade Ibanga Lombane)
Ukuhlanzeka okuphezulu kweGallic acid
IGallic Acid Grade Ikhemisi Ibanga （
IMethyl Gallate (Ibanga Lombane)
I-Propyl Gallate （Ibanga Lokuphakela）
I-Propyl Gallate Grade Ukudla Ibanga le-FCC-IV）
I-Propyl Gallate Grade Ibanga lezemithi)
ILeshan Sanjiang Biological Technology Co., Ltd.yibhizinisi lesayensi nobuchwepheshe elisungulwe ososayensi abadumile bamahlathi emhlabeni jikelele, uMnu Xu Zhongyun, umcwaningi omkhulu weSouthern Research Institute ye-USDA Forest Service, nomcwaningi we-Chinese Academy of I-Forestry.Yabhaliswa futhi yasungulwa eLeshan National High-tech Industrial Development Zone ngo-2003. Ikhiqiza kakhulu izixhumanisi ezahlukahlukene zemithi, amakhemikhali amahle, izithasiselo zokudla neminye imikhiqizo kusetshenziswa izinsizakusebenza zaseChinese Linte-iGalla Chinensis nemikhiqizo yemvelo engeniswe isuka ePeru njengezinto zokusetshenziswa . I-Sanjiang isebenzise ngokugcwele izinsizakusebenza zakwamanye amazwe ukuthola imali yakwamanye amazwe ngokucutshungulwa okujulile nokuthunyelwa kwamanye amazwe, futhi yaba yibhizinisi elihamba phambili kubantu abacebile nasezifundeni ezicebile nokwakha izwe elisha lobusoshiyali nokuqinisa umnotho wendawo ukuze kusizakale abantu.
Inkampani yethu inamandla okuthuthuka kwezesayensi nezobuchwepheshe, futhi inabasebenzi abaningi besayensi nabezobuchwepheshe asebenze ucwaningo kanye nokuthuthukiswa kwemikhiqizo yochungechunge lwensimbi e-galvanized ne-Tara iminyaka eminingi. Futhi sinabasebenzi besayensi nabezobuchwepheshe basekhaya abaziwayo ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwemithi kanye nemikhiqizo yamakhemikhali.
Inkampani yethu ithole izimpumelelo eziningi zesayensi nezobuchwepheshe namalungelo obunikazi, futhi ibambisene neChina Academy Yezamahlathi, iNanjing Forestry University, iNyakatho-mpumalanga Yezamahlathi University namanye amakolishi namanyuvesi ukuthuthukisa ngokuqhubekayo amaphrojekthi wokucubungula ajulile wemikhiqizo yehlathi, futhi imikhiqizo iye yangena kancane kancane imakethe yamazwe omhlaba.
Ngokuya ngezinzuzo zezinqubomgomo, izinsizakusebenza kanye nabasebenzi, inkampani itshale imali yama-yuan ayizigidi ezingama-30 esigabeni sokuqala futhi isiqede imigqa emihlanu yokukhiqizwa kokucutshungulwa kwe-gallic ne-tara; okukhishwa minyaka yonke kungamathani ayi-600 e-gallic acid, amathani angama-300 e-propyl gallate, amathani angama-200 eMethyl gallate, Amathani angama-200 wemikhiqizo yochungechunge lwe-tannic acid; kuphrojekthi yesigaba sesibili, inkampani izosuka ekuxhumaneni nokwenziwa kwemithi, izithasiselo zokudla, imikhiqizo emihle yamakhemikhali iye kwimikhiqizo yamakhemikhali e-biopharmaceutical and electronic, ikhulisa iqembu lomkhiqizo.
Le nkampani yadlulisa ukuboniswa kohlelo lwekhwalithi le-ISO9001 ngoJanuwari 2005; uthole isitifiketi seKOSHER ngo-Ephreli 2005; uthole isitifiketi se-HACCP ngo-Agasti 2009; uthole ilayisense yokukhiqiza le-propyl gallate ngoSepthemba 2015; futhi uthole ukuhlolwa kwezokuphepha kwezinga lesithathu ngoDisemba 2015.
Le nkampani izobambelela kumqondo "wokufuna ukwenza umsebenzi oncomekayo nokusebenza okusimeme", ngokuqhubekayo imunce ubuchwepheshe obuphambili emhlabeni, ikhulise utshalomali ocwaningweni nasekuthuthukisweni, futhi ibambe iqhaza ekuthuthukiseni umnotho wasentshonalanga nasekuqhubekeni kobuchwepheshe bezimboni.
Ikheli: 1666 Jianye Road, High-tech Zone, Leshan City, Sichuan Provinice, China
Ucingo: +86 15390206217
Kwangathi-17-2021 Ukusetshenziswa kwe-proply gallate
Kwangathi-07-2021 Ukuthuthukiswa kwe-high-purity gallic acid kanye nokusetshenziswa kwayo kumakhemikhali kagesi
Febhuwari-23-2021 Ukulungiselela i-Gallic Acid